कहीँ नभएको जात्रा न्यायालयमा, न्यायाधीशको भीड तर न्याय भने दूर ! - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
कहीँ नभएको जात्रा न्यायालयमा, न्यायाधीशको भीड तर न्याय भने दूर !
२०७७ मंसिर ६, शनिबार ०७:०८:००
पाटन उच्च अदालतमा अहिले ३५ न्यायाधीश छन् । तिनका ३५ गाडी चालक र ३५ जनै अंगरक्षक जोड्दा एक सय पाँच हुन्छ । अनि कार्यालयमा पनि तिनको सेवाका खातिर बेग्लाबेग्लै सहयोगी कर्मचारी, इजलास अधिकृत तथा फाँटवाला कर्मचारी छन् ।
हरेक दिन ती बिहान १० बजे नै कार्यालयमा भेला भइसक्छन् । कार्यालयमा काम होस् कि नहोस् ?न्यायाधीशहरु ठाँटिएर कार्यालय आउँछन् । दिनभर कार्यालय वा यतै कतै बस्छन् । गफ चुट्छन् । कोही बाहिर काम छ भन्दै केही दिनभर हराएर साँझ मात्र घर जान्छन् ।
सेवाग्राही ढुक्कले कार्यालय जान सकेका छैनन् । अदालतमा पनि सेवाग्राही जाने वातावरण छैन । पूर्ण क्षमतामा इजलास गठन गरेर मुद्दा अघि बढाउन सकिने अवस्था समेत छैन । त्यसमाथि मुद्दाभन्दा न्यायाधीश बढी भएको अदालतमा कति नै न्यायाधीशले काम पाउँछन्
यता सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भन्दै संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनका दफा समातेर जारी गरेको ८ महिनाअघिको आदेश निष्क्रिय भइसकेको छैन । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासन अधिकारीहरुले सम्झाइरहेकै छन् । तर अदालतमा न्यायाधीशको भीड घटेको छैन ।
यता काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अवस्था पनि त्यस्तै छ । करिब पाटनकै जति न्यायाधीश, तिनका सेवक, रक्षक र कर्मचारीहरु छन् । सेवाग्राहीको भिड पाटनमा भन्दा केही बढी छ । तर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशसँगै कर्मचारीले गर्ने काम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीशको कार्यबोझ खासै धेरै छैन । यहाँ पनि बेकामे र फाल्तु न्यायाधीश बढी हुँदा आसपासमा मदिरालय, मसाज पार्लर र अरु मनोरञ्जनस्थलमा न्यायमूर्तिहरु भेटिने जोखिम बढी देखिएको छ । कामको चाप हुँदा समेत सुरा सुन्दरीका लागि दिउँसै बंक हान्ने न्यायाधीशका लागि त यो अवसर नै बनेको पनि देखिन्छ ।
धेरै न्यायाधीश भर्ती गरेर न्यायपूर्ण समाज र व्यवस्था स्थापना गर्न सकिने भने अहिलेसम्म नेपाल रामराज्य भइसक्नुपथ्र्यो । संसारमा कुनै पनि यस्तो अदालत नहोला, जहाँ मुद्दाभन्दा न्यायाधीशको बोझ बढी होस् । गरीब जनताको गाँस काटेर जम्मा गरेको राजस्व न्यायाधीशका नाममा पार्टीका कार्यकर्ता, न्यायपरिषद र केही ठालू वकिलहरुका आफन्त र विगतमा वकालतभन्दा बढी मुद्दा सहजीकरणमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुको सेवामा लगाएर पोस्ने एक मात्र मुलुक नेपाल नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।
अदालतमा कस्ताकस्ता न्यायाधीश छन् भनेर हेर्न नेपाल बार एसोसिएसन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हालै प्रकाशित गरेका दस्तावेजहरु हेरे पुग्छ । उनीहरुले स्पष्ट भाषामा भनेका छन्, मौजुदा न्यायाधीशहरु मध्ये धेरैचाहिँ निकम्मा र नालायक छन् । तिनले न्यायको भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् । तिनीहरुबाट अन्याय र अत्याचारलाई प्रश्रय पुगेको छ । तिनीहरुबाट भएका अहिलेसम्मका फैसलाको अध्ययन हुनुपर्छ । कतै जानीजानी बदमासी गरिएको छ, कतै नजानेरै न्यायको तराजु बिगारिएको छ । जानीजानी बदमासी गर्नेमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउनुपर्यो । नजानेरै न्याय बिगार्नेलाई सघन प्रकारको तालिम र प्रशिक्षणमा पठाउनुपर्यो, आवासीय रुपमै ।
बार र पूर्वधार पदाधिकारीहरुले लेखेरै यति दिइसकेपछि पनि न्यायिक नेतृत्वको कानमा भने बतास लागेको देखिँदैन । न्याय परिषद र न्यायिक प्रतिष्ठानले पनि चासो देखिएको देखिँदैन । जबकि, कतिपय न्यायाधीशका आचरण, आदेश र फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न सार्वजनिकरुपमै उठेपछि न्याय सुधारका अभियन्ताहरुले अध्ययनका लागि आवाज उठाएका हुन् । आफूमाथि लागेको दाग मेटाउन अतिरिक्त क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने निकायहरु मौन बस्नु थप रहस्यमय छ । न्याय क्षेत्रमै देखिएको यस खालको थेत्तरोपनले सिंगो न्याय व्यवस्थालाई नै दुर्घटनामा पुर्याउने जोखिम बढेको छ ।
वास्तवमा अहिले न्यायाधीशको संख्या यति धेरै भएको छ कि उनीहरुले गर्न सक्ने कामको तुलनामा ३० प्रतिशत पनि कार्यबोझ छैन । घरबाट मुद्दा हेर्छु भनेर निस्किएका न्यायाधीश दिनभरि हाइ काढेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । मुद्दा पाउनका निम्ति मुख्य न्यायाधीशको चाकडी गर्नुपर्छ । कुन दिन आफ्नो इजलासमा मुद्दा पर्छ भनेर जोखना हेरेर घडी पला गन्नुपर्छ ।
नेपालमा यसै पनि न्यायाधीशको दरबन्दी बढी छ । अहिले सर्वोच्चमा २१, उच्चमा १ सय ६० र जिल्ला अदालतमा २ सय ५७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । अरु विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधीकरणको हिसाब बेग्लै छ । अर्धन्यायिक निकायहरुले पनि न्याय निरुपणको काम गर्छन् । त्यसैले अदालतमा यति धेरै न्यायाधीशको भीड जम्मा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ नेपालका विभिन्न अदालतहरुमा अस्वाभाविक रुपमा न्यायाधीशको भीड जम्मा गर्ने होड नै चलेको छ ।
राजनीतिक नेतादेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको स्वार्थ मिल्दा पटकपटक अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । २०७२ सालमा ५७ वटा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरियो भने गत वर्षको मंसिरमा थप ४७ न्यायाधीशको दरबन्दी थपियो ।
कुनै बेला केही कतै काम नलागेका बेरोजगारहरुलाई शिक्षकको जागिर दिएर अल्मल्याइन्थ्यो । अहिले करिब त्यस्तै जागिर न्यायाधीशको भएको छ । लहडका भरमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र आफन्त र कार्यकर्ताहरुलाई जागिर दिने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस पदको गरिमा र मर्यादासमेत नरहने स्थिति आएको छ ।
एकातिर सरकारले महामारीबाट जनतालाई जोगाउन भेन्टिलेटर र आईसीयु स्थापना गर्न सकिरहेको छैन । सामान्य औषधी र उपकरणका लागि विदेशी दाताको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । अर्कोतिर मुलुकको न्यायपालिका भने यो राज्यभन्दा बेग्लै संरचनाजस्तो गरी भटाभट खर्च बढाउँदै छ । एउटा न्यायाधीशका नाममा मासिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । नयाँ थपिएका २९ जना न्यायाधीश पाल्न मात्र डेढ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा दायित्व सिर्जना गरिँदै । यो महामारी कहिलेसम्म चल्छ भन्ने पनि ठेगान छैन । एक वर्षको हिसाब गर्दा साढे १७ करोड रुपैयाँ जनताले तिरेको कर केही व्यक्तिलाई पोस्नका लागि प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा खर्च गरिँदै छ ।
यसै पनि न्यायाधीश बढी भएका र काम नपाएका अवस्थामा खर्च कटौतीमा न्यायपालिकाले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसका लागि करिब एक तिहाइ जनशक्ति मात्र काममा बोलाई बाँकीलाई विदामा राख्न सकिन्छ । बरु तीन–तीन महिनाको सिफ्ट बनाएर आलोपालो काममा लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, गाडी, इनधन आदिमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । एकएक पैँसा राज्यको जोगाइदिँदा पनि कति ठूलो गुन लाग्ने स्थिति छ ।
तर न्यायपरिषदका केही पदाधिकारी अहिले पनि न्यायाधीश भर्ती गर्ने सुरमा देखिन्छन् । राज्य, समाज र जनताप्रति कुनै दायित्व नै नभएजसरी संवेदनहीन तरिकाले खर्च बढाउने सोच यो घातक छ ।
फेरि अदालतमा न्यायाधीशको भीड बढाउँदैमा प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने पनि होइन । न्यायाधीश र अरु जनशक्ति गुणस्तरीय हुनुका साथै चुस्त र विश्वसनीय प्रक्रिया भए मात्र वास्तविक न्याय दिन सकिन्छ । अहिलेका न्यायाधीशमध्ये अधिकांश फैसलाधीश छन् । कतिपय त फैसला पनि लेख्न नजान्नेहरु छन् । इजलास अधिकृतको भर पर्ने र उक्त रायमा सहमत छु लेख्नेहरुको बाहुल्य सबैतिर देखिन्छ । त्यसैले यिनलाई पालैपालो तालिममा पठाउनु उचित देखिन्छ ।
विगतमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरुका पालामा बिनाकुनै मापदण्ड र आवश्यकता हेरी जथाभावी रुपमा अनावश्यक ८०–८० जनाका दरले न्यायाधीश नियुक्त गरियो । निहित उद्देश्य राखेर ती निर्णय भएका थिए भन्ने कुरा अहिले अदालतको प्रांगणमा उभिने हरेकले भन्न सक्छ । र, नियुक्ति विवाद अदालतसम्मै पुगेका थिए । तसर्थ अब न्यायाधीशको भीड बढाउनेभन्दा स्तरीय न्याय सम्पादन गरी न्यायाधीशको मान र मर्यादा बढाउने काममा न्यायिक निकायहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
लक्ष्मीबहादुर निराला, रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता लोभ, मोह, प्रभाव र प्रलोभनबाट मुक्त पाका कानुनविद न्यायपरिषद सदस्य बन्न पुगेका छन् । कम्तीमा तिनले न्यायको मान राख्न सकून् ।
खाने तेलमा कालोबजारी, दुई उद्योग कारबाहीमा
कडा सुरक्षाबिच बाइडेनले आज अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपतिको शपथ ल...
‘निर्मला प्रकरण सल्टाउनु पहिलो प्राथमिकता’
कडा सुरक्षाबिच बाइडेनले आज अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रप...
पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सहयोग गर्न...
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : विषयकेन्द्रित बहस गर्न...
विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरै फैसला ठोक्ने यी चार न्यायमूर्...
सुदूरपश्चिममा ओलीको पक्षमा जनसागर किन उर्लियो ?